Muxuu u baaqday shirkii Dhuusa-Mareeb ka furmi lahaa? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Muxuu u baaqday shirkii Dhuusa-Mareeb ka furmi lahaa?
Muxuu u baaqday shirkii Dhuusa-Mareeb ka furmi lahaa?
4tii Bishaan ayaa lagu waday in Magaalaa Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta Bulshada wada dega deegaanadaGalmudug kaas oo looga gol-lahaa in dadka deegaanka ay gaaraan dib-u-heshiin dhab ah ka dibna ay wada dhistaan Maamul ka hana-qaada Galmudug oo loo wada dhan yahay. shirkaan oo aan furmin waqtigii loogu talagalay ayaa waxaa ku yimi dib u dhac, gudigga gacanta ku hayay ayaana u sabababeeyay arimo Farsamo.
Raysal-Wasaare Khayre iyo Xildhibaan Mahad Salaad
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta gaaray Magaalada Dhuusa-Mareeb ayaa Raisal Wasaare Khayre uga mahadceliyay in uu dib u dhigay waqtiga shirka, maada deegaanka Hobyo uu ka socday shir ay lahaayeen mid ka mida beelaha degga Galmudug.
“Waxaan uga mahadcelinaynaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Xasan Cali Khayre in uu dib noogu dhigay furitaanka shirka, si shirka Hobyo noogu soo gabangaboobo midka Dhuusamareebna uga wada qayb galno furitaankiisa”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Xubnaha ka mid ah Baarlamaanka iyo Mucaaradka Dawlada ayaa horay u dalbaday in shirka Dhuusa-Mareen la dib dhigo inta uu ka dhamaanayo kan Hobyo.
Mucaaradka iyo Raysal-wasaare Khayre oo Kulmay.
Ilo-Wareedyo kala duwan ayaa Horseed-Media u xaqiijiyay in is afgaradka dib u dhigista shirkaan uu dhacay 1dii Bisha September ka dib markii ay kulan isugu yimaadeen Magaalada Muqdisho Xildhibaano ka tirsan Dawlada oo aad u dhaliila Xukuumada Khayre iyo Raysal-Wasaaruhu.
Dhanka kale odayaasha Degmada Cadaado ayaan sheegay in aysan kasoo qaybgali doonin shirka Dhuusa-Mareeb ilaa inta tabashadodoa la xalinayo, Dawlada Federaalka ah ayaana wada dadaalo lagu qancinayo dadka Cadaado.